पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलको आत्महत्याअघिको भिडियोले उब्जाएका प्रश्नहरु : ओम हमाल – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ श्रावण ३०, बिहीबार) ०८:४८
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि रेकर्ड गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
पुडासैनीले न्युज २४ टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम सञ्चालक रवि लामिछाने र दीपक बोहोराका कारण आफू आत्महत्या गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, पुडासैनीले युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीको नामसमेत लिएका छन् । उनीहरुकै कारण आफू आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भिडियोमा खुलासा गरेका छन् । यो भिडियोसँगै पुडासैनी आत्महत्याले गम्भीर मोड लिएको छ ।
नुवाकोट स्थायी घर भएका पत्रकार पुडासैनीले २१ साउनमा चितवनको कंगारु होटलको कोठामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए ।
न्युज २४ टेलिभिजनका सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका लागि रिपोर्टिङ गर्दै आएका पुडासैनीले एक महिनाअघि माउन्टेन टेलिभिजनमा ‘मिसन न्युज’ कार्यक्रम चलाउँदै आएका थिए ।
पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई कारबाही हुने चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लको भनाइ छ ।
‘हामीले भिडियोबारे घटना भएदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेका छौं । आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको फेला परेको छ । अब पीडित परिवारले किटानी दिए नाम लिएका माथि पक्राउ गरेर अनुसन्धान हुन्छ,’ मल्लले भने ।
यो भिडियोसँगै अब न्युज २४ टेलिभिजनका पत्रकार रवि लामिछाने, दीपक बोहोरा, युवराज र नर्स अस्मिता कार्कीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।
मोबाइल प्रहरी सङ्ग छ , भिडियो कसरी बाहिरियो हैट कुरो गम्भिर छ; नेपाल आजले कहा बाट पायो??
-हिजाे आज नेपाली अनलाइन हरू मा रबि र शालिकराम काे समचार हरू अईरहे र अहिले भिडियो नै बाहिरियाे जुन भिडियो 8:47 मिनेटमा एउटा आवाज आएकोछ त्यो मैले अड्कल गर्दा किन भनेको आवाज आएको छ। र त्यस लगतै 8:48 मा क्यामेरा हल्लियो बायाँ पट्टि कोहि बसेको जस्तो देखिन्छ।
र 9:16 देखि 9:18 को बिचमा केही च्यारक्क आवाज आए जस्तो हुन्छ ।
अनि बायाँ पट्टि हेरेको हुन्छ यानिको कोहि मान्छेको अनुहारमा हेरेजस्तो गर्छ। भिडियो Editing भएकाे जस्तो देखिन्छ । 2:06 मिनेट सम्म पछाडि सिरानि हुदैन तर 2:07 मिनेट पछि पछाडि सिरानि कसरी आउछ ?
र अन्तिममा पनि भिडियो संकास्पद छ, राम्रो सँग छानबिन होस दोषिलाई कडा कामकारबाही होस् ।
शालिकरामको आत्महत्या गर्नु अघिको video राम्ररी हेरेर मुल्यांकन गर्नुहोला
1=08:46 मिनेटमा देब्रेपट्टी निलो टिसर्टमा कसैको पाखुरा देखियको छ
2=ध्यान दियर सुन्नु भो भने बिचबिचमा अरु कसैले हल्ला गरेको सुनिन्छ
3=video सुतेर बनाकोछ अरुबेलामात हातले मोबाइल समात्यो होला तर जब अन्तिममा दुई हात जोडेर नमस्कार गरेकोछ त्यतिबेला मोबाइल अड्याउने ठाउं के हुनसक्छ जबकी उ उत्तानो परेर सुतेकोछ
4=आंखामा राम्ररी हेर्नुस उसले लेखेको कुरा पढेर भनिरहेको छ
5= महिनाको डेढ लाख कमाउनी मान्छे पन्ध्र हजारको जागिर किन खान जान्छ यदि जबरजस्ती लगेको हो भने उमा के त्यस्तो अनौठो प्रतिभा थियो?
6=करोडौंको सम्पत्ती छरे फेरि किस्ता तिर्न सकिन भन्छ के मरेपछी ॠण तिर्नै नपर्ने होर ?श्रीमतिलाइ सम्पत्ती आफ्नो नाममा बनाउ भन्नेले ॠण तिर भनेर किन भनेन?
7=मसंग रबिबिरुद्दको प्रमाणहरु छरे रबिलाइ फाँसी होस भन्ने मान्छेले त्यो प्रमाणहरु किन देखाउन सकेन?
8=राम्ररी आंखामा हेर्नुस बेलाबेलामा कसैलाइ हेर्दै गरेको छ
के तपाइंहरुलाइ video हेर्दै गर्दा यस्तो लागेन उसको खुट्टा बांधियको छ , छातिमाथी कोहि चढेर मोबाइल समायको छ जसलाइ बेलाबेलामा शालिकरामले हेर्दै गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ र टाउकोतिर कोहि हतियार लियर बसेको छ
दिबंगत आत्माप्रती हार्दिक श्रद्दान्जलि परिवारमा सहानुभुती छ हो म रबिको समर्थक हुं तर अन्धो भक्त हैन उचित छानबिन होस दोषिले सजायं पाओस निर्दोष नफसोस म अरुजस्तो भेंडा हैन त्यसैले सत्यतथ्य नआयसम्म अनुमानमात्र गरेर बस्छु तिमी दोगला हरुजस्तो अरुले भनेकै भरमा कसैको चरित्र हत्या गर्न मेरो संस्कारले दिंदैन जय देश
सालिकराम पुडासैनि काण्डमा अाशंका गर्नुपर्ने विषय हरु येस्तो देखियो !!
१) सेल्फि भिडियो रुदै खिच्दै गर्दा एक्कासी सिरानिमा सेतो तकिया अाउँदा क्यामेरामा हलचल किन भयन ?
२)७ मिनेट २३ सेकेन्ड मा देब्रे साइड देखिएको हात कस्को होला ??
३) ८.४७ सेकेण्डमा सालिकरामको भन्दा भिन्न अावाज ”किन”भन्ने कसको अायो ?
४) अन्तिममा नमस्कार गरि दुवै हात जोड्दा सेल्फि कसरि भयो ? क्यामरा किन हल्लिएन ??
५) भिडियोमा लगायको कपडा र झुण्डिएको अवस्थाको कपडा कसरि फरक भयो ?
६) केहि भिडियो अलि ईडिट गरेको जस्तो छ ,वास्तविक भिडियो कता छ ?
७) भिडियो एक्कासी बिच बाट सुरु कसरी भयो ?
८) झुन्डिएको तस्बिर मा एउटा खुट्टा ले बिस्तरा मा टेकेको छ खुट्टा ले टेकि सके पछि प्राण जान्छ र ?
९) के झुन्डिनु भन्दा पहिले शालिकराम ले आफ्नै शरीर मा कुनै किसिम को प्रहार गरे त तेहा निला डाम र घाउ कहा बाट आयो ?
10) जहाँ बाट भिडियो सुरु हुन्छ त्यो भन्दा पहिले देखि नै रोइ रहेको देखिन्छ नत्र लाइब आउदा बित्तिकै तेसरी रुन सम्भव छ ??
11) भिडियो सुरु हुनु भन्दा पहिले देखि नै कसै सित बोल्दै गरेको छ त्यसको अगाडी को भाग खै ??
यो सबै बाच्न पाउछु भन्ने आश ले बोलेका हुन !! हत्याराले हरु ले यो यो भन भनेर लेखाएर घोकाएर सिकाएर बोलेको प्रष्ट शालिकराम का आँखा को त्रास ले देखाउछ !!
1. महिनाको एकलाख पचास हजारको जागिर खाने मान्छे पन्ध्र हजार तलब मा किन जानू ?
2. रिणको कारणले डिप्रेशनमा गाको भए करोडौको सम्पती के को लागि ?
3. भिडियोको 8:45 मा अर्को ब्यक्तिको आवाज र हात देखिनु
4. मृत सरिरमा चोट हरु हुनु
5. फासिमा झुण्डिएको भन्दा नि झुण्डाइएको
6. अन्तिम मा2हात ले नमस्ते गर्दा मोबाइल न हल्ली सजिलै अडिनु ..
7.माउन्टेन टेलिभिजनमा गैसकेपछि पनि रबि लामिछानेको खुलेर तारिफ र समर्थन गर्नु ।
८, बिच्च बिच्च मा केमरा हल्लिएको छ, ट्राइपोड् मा राखे को भय हल्लिने कुरै भयन, सल्फि लिएअको भय दुइ हात जोड्ने कसरि ?
9, भिडिओ मा गन्जि , झुन्डीदा सर्ट पाइंट् ?
१०, दुबै खूट्टा हरु सपोर्ट् पाउने ठाउ मा छन , एसरि आत्माहत्त्या असम्भव् हुन्छ ।
११, बिच्च बिच्च मा रोकिदै, अक्मकाएर तल हेर्छन् , लेखर पढेको हुनसक्छ।
१२, होटलका का प्पेसेज् तिर CCTV जडान् थिए कि थिएनन , उन्को कोठा कोहि कसैको आवोत् जावोत् , किन नहेर्ने ?
(२०७६ श्रावण ३०, बिहीबार) ०८:४८ मा प्रकाशित